musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Cuba Kupwanya Nhau » Kufamba Kutsva kweCuba: Hapana Kuvharirwa, Hapana Miedzo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cuba Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kufamba kuenda kuCuba
Cuba yakasundira kuvhurazve kushanya uye kudzoreredza chiitiko chiri kuuya ichimirira kuvhurwa zviri pamutemo kwemiganhu muna Mbudzi 15.
Hurumende yeCuba yakasimudza chisungo chekuvharirwa kwevafambi vekunze kutanga musi wa7 Mbudzi.
Izvi zvakasimbiswa neGurukota rezvekushanya, Juan Carlos García nhasi pamusangano wevatori venhau muHavana pamusoro pekugadzirira kwechikamu chekuvhurazve zviri pamutemo.
Iyo "inodzorwa" kuvhurwazve kwemasevhisi evashanyi inopindura kufambira mberi kwehuwandu hwekudzivirira kurwisa COVID-19 munyika.
Minister vakaratidzawo kuti chinodikanwa chekuendesa bvunzo dzisina kunaka dzePCR kune avo vanosvika pane chero nhandare dzendege pachitsuwa ichi zvichasimudzwawo kubva pazuva rechinomwe, kunyangwe vachifanira kuratidza kuti vakabaiwa nechero yemishonga yakatenderwa neWHO.
Vana vari pasi pemakore gumi nemaviri havazofanirwa kuratidza chero PCR bvunzo kana chirongwa chekudzivirira kana vasvika munyika. Hurumende, yakatsanangurwa naGurukota, icharamba ichiongorora epidemiological ongororo, pamwe nekusungirwa kushandiswa kwemasks mumaterminals uye munyika yese.
Kiyuba yakamisa ndege dzekutengesa nedzechata muna Kubvumbi 2020. Muna Gumiguru wegore rimwe chetero, yakavhurazve nhandare dzendege, asi nekudzikiswa kushoma kwendege kubva kuUnited States, Mexico, Panama, Bahamas, Haiti, Dominican Republic, neColombia.
Kana zviri zvekufamba kubva kuItari, Cuba yakawana mwenje wakasvibira neFarnesina, Italy Ministry of Foreign Affairs, pane "E" rondedzero, iyo inosanganisira nyika kwadzinogona kuenda chete nekuda kwezvikonzero zvebasa uye nekukurumidzira, asi kwete zvekushanya. . Murayiro wakaita kuti pave neboka racho wakapera musi wa25 October, zuva iro mamiriro enyika dzakasiyana-siyana dzaigona kuchinja nokuda kwebasa rokune dzimwe nyika.
Huwandu hwekudzivirira kurwisa COVID-19 muCuba inotarisirwa kusvika pamusoro pe90% yehuwandu muna Mbudzi.
Denda risati rasvika, kushanya yaive yechipiri yeCuba yepamutemo sosi yemari yekunze uye yakapa chikamu gumi kubva muzana chegross chigadzirwa (GDP).